Rose of Sharon: June 2012
၂၆ရက်ကနေ့ကနေဂျူလိုင်၂၃ရက်နေ့အထိ ပြင်သစ်ကိုသွားလည်မှာမို့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုခဏတာအတွက် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်... ဆွစ်ဇာလန်ကိုလဲ ခဏသွားလည်ဖို့အစီစဉ်ရှိပါတယ်...ဟိုကနေ ပို့စ်တင်ဖြစ်မတင်ဖြစ် မသေချာတာမို့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တာပါ.... ခရီးကနေပြန်လာမှဘဲ ပို့စ်အသစ်တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...
ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းများ ဘလော့ကိုလာလည်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်....
Posted by rose of sharon at 4:15 PM 18 comments: Links to this post
ရှေးဦးစွာ လူ့လောကထဲသို့ ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့သော မိဘနှစ်ပါးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်…. ထိုနေ့မနက်ခင်းတွင် မိုးဖွဲဖွဲရွာနေခဲ့သည်…. နေ့စေ့လစေ့မီးဖွါးခါနီး ဗိုက်နာနေရင်းက အိမ်မှာကျန်ခဲ့မည့် ခလေးများအတွက် ဆေးရုံမသွားခင် စားစရာများစီမံနေခဲ့ရသည်… ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဘေးတဖက်တချက်မှ အိမ်နီးချင်းများကို ခလေးများသာအိမ်မှာကျန်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးပြောကြားအပြီး အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေချိန်မှာ မီးဖွါးခါနီးလက္ခဏာဖြစ်သော ဗိုက်နာခြင်းက အနာစိပ်လာခဲ့သည်… အဖေလမ်းထိပ်ထွက်ငှားလာသော အငှားကားအိမ်ရှေ့ရောက်ချိန်မှာ အမေအတော်နာကျင်ပင်ပန်းနေခဲ့သည်… ခလေးအကြီးများမွေးဖွါးရာ မြို့လယ်ခေါင်ဆေးရုံသို့မသွားတော့ဘဲ ပိုနီးမည်ထင်သည့်ဆေးရုံသို့ အမြန်မောင်းခိုင်းခဲ့ရသည်…ဆေးရုံရောက်ခါနီးကားလမ်းဆုံတခုတွင် ကားအဆောင့် ရေမွှာအိတ်ပေါက်ပြီး အပြင်းပြဆုံးနာကျင်မှုနှင့်အတူ နီတာရဲခလေးလေးပါထွက်ကျလာတာမို့ အဖေကလက်နှစ်ဖက်နှင့်ခံထားခဲ့ရသည်… ဆေးရုံအရောက် အရေးပေါ်အကူအညီနှင့် အငှားကားပေါ်မှာတင်ချက်ကြိုးဖြတ်ပေးခဲ့ရသည်…. အမေနှင့်မွေးခါစကျမကို ဆေးရုံခန်းထဲခေါ်ဆောင်သွားချိန်တွင် အဖေက သွေးနှင့်အညစ်အကြေးတွေပေကျံနေသော အငှားကားကို အားနာစွာဆေးပေးခဲ့ရသည်….
ကျမကမွေးစကပင်မိဘများကို ပင်ပန်းစေခဲ့သူဖြစ်သည်…ငယ်စဉ်ဘဝစထဲက ပင်ပန်းခဲ့ကြရုံမက ဖြူပတ်ဖြူရော် သေးသေးကွေးကွေးကျမက အလွန်ချူချာခဲ့သေးသည်မို့ ကျမအတွက် အဖေနှင့်အမေ တောက်လျှောက်ပင်ပန်းခဲ့ကြသည် … ထိုကဲ့သို့ချူချာသူကျမက လူကောင်သေးသေး စိတ်ကကြီးကြီးနှင့် မိဘများမကြိုက်တာမှန်သမျှ လုပ်ချင်တာရောရွဲ့ချင်တာရောပေါင်းပြီး အကုန်လုပ်ခဲ့သူမို့ လူရောစိတ်ပါပင်ပန်းခဲ့ကြသော မိဘနှစ်ပါးကို ခုချိန်မှာပြန်တွေးမိတိုင်း နောင်တတွေတလှေကြီးရမိသည်… ကျမဆိုးသလောက် ကျမအပေါ်အချစ်မပြယ်ခဲ့ကြသော မိဘနှစ်ပါးကို ကျမကျေးဇူးတင်ပါသည်….
ဘဝရဲ့အမှတ်တရတွေများစွာ တမိုးအောက်မှာ အတူမျှဝေခဲ့ကြသော အစ်ကိုတစ်ယောက်၊အစ်မသုံးယောက်နှင့်ညီမတစ်ယောက်တို့အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်… လိုတမျိုးမလိုတမျိုး အပေါင်းအသင်းများအား ခယစွာအတူကစားဘို့ ပေါင်းသင်းနေစရာမလိုဘဲ မောင်နှမတတွေ အတူတူကစားခဲ့ရခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်… မိဘများအိမ်မှာမရှိတိုင်း ညီမများအားမိဘနေရာဝင်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော အစ်ကိုကြီးအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်…အရွယ်ရောက်ခါနီးအချိန် ဖြစ်တတ်သော မိန်းခလေးတို့၏သဘာဝကို ကြိုတင်ပြောပြပေးခဲ့သော အမအကြီးနှစ်ယောက်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်… အသက်နှစ်နှစ်ထဲပိုငယ်ပေမဲ့ သူကထွားထွား ကိုယ်ကညှက်ညှက်နှင့်မို့ အစစအရာရာ အနစ်နာခံ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သော တကျောင်းထဲတချိန်ထဲကျောင်းအတူတက်ခဲ့ရသော အမလတ်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်… အစ်ကိုအစ်မတွေ အရွယ်ရောက်ချိန် အတူမကစားကြတော့သည့်အခါ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်အရွယ်ကျမနှင့် အတူဆော့ကစားပေးခဲ့သော ညီမအငယ်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်….
အိမ်နီးချင်းကောင်းများ၊ အိမ်နီးချင်းဆိုးများ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်… သူတို့တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေထဲက ကောင်းတာတွေ ကိုအတုယူပြီး မကောင်းတာတွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ခဲ့ရသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်… အပြစ်ကင်းသော ခလေးဘဝမှငယ်သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်…. အမက၆ရန်ကင်းမှသူငယ်ချင်းများ ၊ အမက၄ရန်ကင်းမှသူငယ်ချင်းများ၊အထက၂ရန်ကင်းမှအလယ်တန်းဘဝသူငယ်ချင်းများနှင့် အထက၁ရန်ကင်းမှအထက်တန်းဘဝသူငယ်ချင်းများ၊ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်… အဖြူအစိမ်းဝတ်ဘဝမှာ အထီးမကျန်ခဲ့ဘဲ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခွင့်ရခဲ့သောကြောင့် ထိုသူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်…
ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ မေဂျာတူသူငယ်ချင်းများ၊ ဖယ်ရီအတူစီးခဲ့ကြသော ရန်ကင်းမှသူငယ်ချင်းများ၊မေဂျာမတူပေမဲ့ ကန်တင်းအတူထိုင်နေကျသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်… နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင်ခင်မင်ခဲ့ရသောသူငယ်ချင်းများအားလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်…
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ကျောက်ကုန်းရှိ ကံဘဲ့နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ လူကြီးမိဘဆရာသမားများ၊ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်.... ခရစ်ယာန်နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်၊ပဲခူးသာသနာနယ်နှင့် သာသနာဂိုဏ်းပေါင်းစုံမှ သူငယ်ချင်းများအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်....
ကျမအား မြှောက်ပင့်ပေါင်းသင်းခဲ့ကြသော၊နှိမ့်ချပေါင်းသင်းခဲ့ကြသော အပေါင်းအသင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်.... ဘဝရဲ့အနိမ့်အမြင့် အချိုးအကွေ့တိုင်းမှာ ဟန်ချက်ညီစွာရပ်တည်နိုင်ဘို့ ဘဝသင်ခန်းစာများ သူတို့ထံမှသင်ယူခဲ့ရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်....
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း၊လက်နှိပ်စက်သင်တန်း၊ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများမှသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်… အိမ်ထောင်မကျခင်အထိအလုပ်လုပ်ခဲ့သော Nikko Hotel မှသူငယ်ချင်းများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်… ကျမကိုချစ်ခဲ့ကြသော ကျမကိုမုန်းခဲ့ကြသော ရည်းစားဟောင်းများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်…
ကျမအပေါ်ကောင်းခဲ့ကြသောသူငယ်ချင်းများကို တန်ဘိုးထားကျေးဇူးတင်ပါသည်… အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရသော သူငယ်ချင်းများ၊အပေါင်းအသင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်…ကျမကိုမနာလိုခဲ့ကြသောအပေါင်းအသင်းများကြောင့် ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်သိခဲ့ရခြင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်… ကျမကိုမကောင်းပြောခဲ့ကြသော အပေါင်းအသင်းများကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုမိုဆင်ခြင်စွာနေထိုင်လာတတ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်…. ကြီးမှတွေ့ပြီးပေါင်းဖြစ်ကြသော်လည်း ငယ်ပေါင်းများကဲ့သို့ ခင်မင်ရင်းနှီး ပွင့်လင်းဖော်ရွေစွာ ပေါင်းသင်းခဲ့ရသော သူငယ်ချင်းများအား မြတ်နိုးတန်ဘိုးထား ကျေးဇူးတင်ပါသည်….
ဘလော့အသိုင်းအဝိုင်းမှမြင်ဖူးသော ဘလော့ဂါများ၊ မမြင်ဖူးသော ဘလော့ဂါများအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်… ကျမကို ဘလော့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပျော်မွေ့စေသော ဘလော့ဂါအသိုင်းအဝိုင်းလေးကို ကျမအလွန်တန်ဘိုးထားလျှက် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရသော ဘလော့ဂါများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်…ဘလော့မှတဆင့် ဖေ့ဘွတ်မှတဆင့် ခင်မင်ခဲ့ရသော နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ၊ဆရာမများကိုလည်း လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်....
ကျမရေးသမျှကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း လာအားပေးကြသော စာဖတ်သူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်…ဖေ့ဘွတ်မှသူငယ်ချင်းများအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်…ဖေ့ဘွတ်မှမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသော ဖေ့ဘွတ်ရောင်းရင်းများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်… မွေးနေ့ဆုတောင်းတရာကျော်အတွက် အတိုင်းမသိဝမ်းသာကြည်နူးမိပါသည်…
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကျမချစ်သောကျမကိုချစ်သော ကျမ၏မိသားစုလေးကိုကျမကျေးဇူးတင်ပါသည်… ချစ်ခင်ပွန်းချစ်သားသမီးများနှင့် ဘဝခရီးကိုအတူလျှောက်နေရသောကြောင့် ကျမဘဝ၏ရှင်သန်ခြင်းက အဓိပ္ပါယ်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်…
Posted by rose of sharon at 10:27 AM 15 comments: Links to this post
Posted by rose of sharon at 8:33 AM 8 comments: Links to this post
ချက်စားဖြစ်တာလေးတွေပါ... ခုတလော မအားပါဘူး... ခလေးတွေကျောင်းသွားချိန် လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်... ခလေးတွေကျောင်းကပြန်ရောက်ရင် သူတို့တွေအတွက်ဘဲ အချိန်ပေးရတာဆိုတော့ ဘလော့ပေါ်တောင်မရောက်ဖြစ်ဘူး...
ဝက်သားဒုတ်ထိုးနဲ့ကြာဇံကြော်က တစ်ရက်သက်သက် သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်လည်ခေါ်ချက်ကျွေးဖြစ်တာပါ... ကြက်တောင်ပံအင်ဒီးယန်းသုတ်ကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် အိမ်မှာ စမ်းလုပ်စားဖြစ်တာပါ...
အလုပ်တွေရှုတ်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ ခလေးတွေရဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်နီးလာလို့ပါ... ဇူလိုင်နဲ့သြဂုတ်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေတိုင်းရန်ကုန်ပြန်လည်နေကျပါ... ခလေးတွေကလည်းရန်ကုန်မှာ တဝမ်းကွဲမောင်နှမစုစုပေါင်း၉ယောက်ကမတိမ်းမယိမ်းတွေမို့ ကျောင်းပိတ်တာနဲ့ကို ပြန်လည်ချင်ကြတော့တာ...ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာ သူ့နေရပ်ကိုမပြန်ဖြစ်တာသုံးနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခလေးတို့အဖေက သူ့နေရပ်ပြန်လည်စရာကိစ္စပေါ်လာတာမို့ အဲဒီအရင်သွားပြီးမှ ရန်ကုန်ကိုအလည်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်... ခလေးတွေကတော့ ရန်ကုန်ပြန်ဘို့ရက်နည်းသွားပြီဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြလို့ ချော့နေရတယ်....
ဗီဇာအတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ စောင့်၊ဗီဇာတင်၊လေယာဉ်လက်မှတ်ကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်တွေရှုတ်နေလိုက်တာ ရေးလက်စတန်းလန်းတွေ အဆုံးသတ်တဲ့ဆီကိုမရောက်တော့ဘူး... ခုဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ လက်ဆောင်တွေပေးဘို့ ဈေးဝယ်ထွက်ရပြန်တယ်...ခလေးတွေကျောင်းသွားချိန်ဈေးဝယ်၊ ခလေးတွေပြန်ကြိုပြီးရင် ခလေးတွေနဲ့ဘဲနေနဲ့ ဘလော့ကိုလှည့်မကြည့်အားတော့ဘူး...
အခုခလေးတွေအဖေရဲ့မွေးရပ်မြေမှာ မှန်းထားတာထက် ပိုနေဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပြန်တော့ ဒီကျောင်းပိတ်ရက် ရန်ကုန်ပြန်မဲ့ကိစ္စကို လက်လျှော့ရတော့မယ်... သမီးလေးကိုနားလည်အောင်ပြောပြလို့ရပေမဲ့ သားလေးကိုတော့ချော့နေရတုန်း... သူကရန်ကုန်ကတဝမ်းကွဲတွေနဲ့အသားကုန်ဆော့ဘို့ အားခဲထားတာ...
ကိုယ်ကိုတိုင်က ရန်ကုန်ဘဲပြန်ချင်ပေမဲ့ အိမ်ထောင်တခုထူထောင်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်သဘောကိုယ့်ဆန္ဒတခုတည်းနဲ့မှမဟုတ်တော့တာ... ကိုယ့်အတွက် သူ့အတွက် ငဲ့ညှာစဉ်းစားပေးရသေးတာဆိုတော့ ဒီနှစ်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အတွက် ကိုယ့်ဆန္ဒကို မျိုချထားလိုက်ပါတော့တယ်...
ရန်ကုန်ကိုတော့ဒီဇင်ဘာပြန်လည်ဘို့မှန်းထားပါတယ်... တခြားတနိုင်ငံမှာနေတဲ့အမကလဲ ဒီဇင်ဘာရန်ကုန်ပြန်လည်ဘို့ရှိတော့ မတွေ့တာကြာတဲ့အမနဲ့ဆုံဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ရန်ကုန်ခရီးစဉ်နောက်ဆုတ်လိုက်ရကျိုးနပ်ပါတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြေသိမ့်ပါတယ်....
ဘလော့တော့အရေးကျဲနေမယ်ထင်ပါတယ်... အချိန်ရရင်ရသလိုတော့ရေးနေမှာပါ... ဘလော့ပေါ်ကနေရန်ကုန်ကိုဇူလိုင်လအလည်ပြန်လာရင်တွေ့ဘို့ပြောထားတဲ့ ဘလော့အသိုင်းအဝိုင်းက သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်... ဒီဇင်ဘာမှဘဲတွေ့ကြတော့မယ်နော်...
Posted by rose of sharon at 6:49 AM 12 comments: Links to this post